I-Sauta Suite GuestHouse (I-Habitacion Matrimonial) - I-Airbnb
I-Sauta Suite GuestHouse (I-Habitacion Matrimonial)
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguSauta
ISISEPHISHA: Indlu yethu inamagumbi akhanya kakuhle anombono omangalisayo weLake Titicaca, ikhitshi elixhotyisiweyo elijongene negadi, igumbi lokuhlala elitofotofo lokuphumla nelokunandipha umoya nebala elihle elizaliswe ziintyatyambo ukuze unandiphe ilanga lasemva kwemini.
ISIXHOSA: Indlu yethu inawona magumbi amahle edolophini akhanyiselwe kakuhle ngembono emangalisayo yeChibi iTiticaca, ikhitshi elixhotyisiweyo elinombono wegadi yethu, igumbi lokuhlala elitofotofo kunye negadi entle ezele ziintyatyambo.
Sifuna ukuba iindwendwe zethu zizive zisekhaya kwaye oku kwakucingwa xa sakha iSauta Suite GuestHouse, enokukhanya okuhle kunye nembono emangalisayo yechibi kwigumbi ngalinye lendlu. Indlu yethu ikwibhloko enye ukusuka echibini, imizuzu eyi-07 uhamba ukuya embindini weCopacabana kwindawo egqibeleleyo ukonwabela ukuthula kwaye umamele amaza echibi kodwa ikufutshane kakhulu neziko, imarike, izikhephe eziya e-Isla del. uSol kwisitrato esikhulu apho ubomi ebusuku.
Sifuna ukuba iindwendwe zethu zizive zisekhaya kwaye yile nto besiyicinga xa sakha iSauta Suite GuestHouse ngokukhanya okukhulu kunye nombono omangalisayo wechibi kwindawo nganye yendlu. Indlu yethu ikwisitalato esi-1 ukusuka echibini, imizuzu eyi-07 uhamba ukuya kumbindi wedolophu, kwindawo egqibeleleyo ukonwabela ukuthula kwaye umamele amaza echibi kodwa ikufutshane kakhulu neziko, imarike, izikhephe eziya e-Isla del Sol, kwaye isitrato esikhulu apho kwenzeka khona ubomi baseCopacabana ebusuku.
4.61 · Izimvo eziyi-41
Kuthe cwaka kakhulu, kufutshane nombindi naphambi kweChibi iTiticaca.
Ukuzola kakhulu, kufutshane nelali kwaye phambi kwechibi.
Umbuki zindwendwe ngu- Sauta
Siya kuhlala sikufutshane ukukunceda.
Siya kuhlala sisondele, ukukunceda.